Jaal Daawud Ibsaa Ayyaanaa hogganaa ABO qofa osoo hin taane hogganaa Oromoo hundaati, gantuuf yartuun haa dhageesuu. – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioJaal Daawud Ibsaa Ayyaanaa hogganaa ABO qofa osoo hin taane hogganaa Oromoo hundaati, gantuuf yartuun haa dhageesuu.
Jaal Daawud Ibsaa Ayyaanaa hogganaa ABO qofa osoo hin taane hogganaa Oromoo hundaati, gantuuf yartuun haa dhageesuu.
Warri shira xaxus abdii haa kutatuu. Jaal Daawud Ibsaa nama dhugaa qabatee deemu, nama Oromoof jiraate, nama siyaasni inni hordofu sabboonumma Oromoo isa dhugaa irrati hundeeffameedha. Adeemsi Jaal Dawuud Ibsaa Oromoo gara bilisummaatti geessa, dukkana gabrummaa fi umrii gita bittootaa gabaabsa.
Nama kana Oromoodhaaf Rabbiitu hambaa godhee hambise. Utuu gaafa summii nyaachisan san du’ee jiraatee yoona Oromoon bittinnaaa’ee ture. Jaal Daawud qabsaa’aa dhugati, kanaaf tokkummaa fi jaalala hayyoota keenyaaf qabu agarsiisuuf Jawar fi Baqqalaan faan akka lagannaa nyaataa adda kutan gorse, isaanis itti walii galanii gorsa isaa fudhatan.
#Oromoon Oromoo ta’uu isaa qofaan Jaal Daawud jala hiriiree qabsoo isaa galmaan gahachuu qaba.
Qabsoo irraa hin laafannu!!
Akka injifannu homaa hin shakkinu!!
Barattoonni Oromoo Manneen Barnootaa Qophaa’inaa Magaalaa Naqamtee keessatti argamanitti baratan, Qormaata xumuraa erga fudhatanii booda, Warraaqsa adeemsisuu;
Oromoo walitti buusuun bara aangoo ofii dheereffachuuf Aangawoota Mootummaa Koloneeffataa Impaayera Itoophiyaan shira Uummata Oromoo irratti barootaaf adeemsifamaa jiruun wal-qabatee, Oromoo goseen Booranaa fi Gujii wal-irratti kaasuuf jecha shirri haaraan xaxamee hojiitti hiikamaa jiraachuu
#RSWO – Bitootessa 14, 2021
Kora Sabaa” seeraan alaa yeroo ammaa kana Waajjira Muummee, Finfinneetti taasifame ilaalchisee Ibsa ABO | KELLO MEDIA (Bitootessa14,2021)
PPn Oromiyaa,Cundhuurri Oromiyaa keessaa Godinaaleen 10, aanotni 51 walumaa galaan gandoota 867 tahan keessatti caasaan bulchinsa mootummaa diigamee harka uummataa galuu amane. Gamaggama taasifamaa jiruun Oromiyaan yeroo gabaabaa keessatti nu harkaa baati jedhaniiru.
United States Calls for Full, Independent Investigation of Human Rights Abuses in Ethiopia
Oduu Simbirtuu fi Raajii